अलमलमा परेको जसपा - नेपालबहस
अलमलमा परेको जसपा
| १४:२५:४७ मा प्रकाशित
१ चैत, काठमाडौं । सत्ता राजनीतिको केन्द्रमा देखिएको जनता समाजवादी पार्टी कसको साथ लागेर जाने भन्ने द्विविधामा परेको छ ।प्रकारान्तरले जसपा सत्ताको चावी त बन्यो, तर उसले उठाएका माग र मुद्धा भने फेरि पनि अलपत्र नै छाड्नुपर्ने बाध्यता छ । किनभने रेशम चौधरीको रिहाई र संविधान संशोधन दुबै विषय सोचेजस्तो सहज छैनन् । जहाँसम्म लाल आयोगको प्रतिवेदन छ, त्यो सार्वजनिक गरेर जसपालाई खासै प्राप्ति हुने अवस्था छैन । यसमा केवल नश्लीय विभेद र जातीय मुद्धालाई उठान गर्ने मसला मात्र छन् ।
त्यसैले हातमा चावी हुँदा हुँदैपनि सत्ता नखाउँ दिनभरिको शिकार खाउँ कान्छा बाउको अनुहार हुने भएको छ । यही रनभुल्लले गर्दा कहिले केपी ओलीसँग नजिएको प्रतीत हुन्छ भने कहिले कांग्रेस माओवादीतिर ढल्केको अनुभूति हुने गरेको छ । फागुन २३ मा सर्वाेच्च अदालतले गरेको फैसलापछि ब्यूँतिएको एमाले र माओवादी केन्द्र अहिले विपरित ध्रुवमा विभक्त छन् ।
जसपा भने यी दुई शक्तिको चेपुवामा छ । कहिले एमालेसँग त कहिले कांग्रेस माओवादीसँग घनीभूत छलफल गर्न विवश छ । वार्ताको दौरान जसपा नेताहरुले प्रष्ट बुझेका छन् कि रेशम चौधरी काण्ड सल्टाउन सोजे जस्तो छैन । रेशमलाई कैदमुक्त गर्न सरकारले मात्रै चाहेर हुने अवस्था रहेन । जिल्ला र उच्च अदालतबाट दोषी ठहर भइसकेका रेशमलाई त्यतिकै छुटाउन नसकिने अवस्थाबारे पार्टी निकट कानून व्यवसायीहरुले नै बताइसकेका छन् । कैदमुक्त गर्न सर्वाेच्च अदालतकाे पुनरावलोकन हुनुपर्छ । दुई तहले दोषी ठहर गरेको व्यक्तिलाई मुक्त गर्न अदालतकै आदेश आवश्यक पर्छ । सरकारसँग गरेको सहमतिले अदालत प्रभावित हुने कुरा भएन ।
कदाचित कैद मिनाहा वा छुट दिने अवस्था आयो भने पनि रेशम सांसदकाे हैसियतका रहन पाउने छैनन् । यस्ता जटिलताले गर्दा यो मुुद्धाको कुनै अर्थ नहुने यथार्थ जसपा नेताहरुले राम्ररी बुझेका छन् । अब जहाँसम्म झुठ्ठा मुद्धामा फसाइएका कार्यकर्ताको रिहाईको विषय छ, त्यो कुनै समस्या भएन । जोसँग सहकार्य वा सत्ता साझेदारी गरेपनि फरक परेर । संविधान संशोधनको मुद्धा पनि यतिबेला आएर सजिलै पास नहुने अवस्था निर्माण भएको छ ।
किनभने नेकपा विभाजित थिएन भने ओलीसँग गरेको सम्झौता काम लाग्थ्यो होला । तर अहिले ओलीसँग एमालेको शक्ति मात्र छ । माओवादी अलग भएपछि ओलीको मात्रै साथ र समर्थनमा संविधान संशोधन संभव छैन । किनभने संविधान संशोधनका लागि दुई तिहाई मत आवश्यक पर्छ । त्यो भनेको एमाले र कांग्रेवा वा माओवादीको पनि साथ । एमालेसँग सत्ता समीकरण गरियो भने पनि त्यो संख्या पुग्दैन, कांग्रेस माओवादीसँगले पनि काम लाग्दैन । त्यसैले अब जसपाको कुनैपनि माग र मुद्धा सोचेजसरी पूरा हुने अवस्था देखिंदैन ।
जसपा भित्र अर्काे ठूलो समस्याका रुपमा रहेको छ– दुई लाइन धार । गएको बैशाखमा ओलीले तत्कालिन समाजवादी पार्टी विभाजन गर्ने हेतुले ल्याएको अध्यादेशले जसपा विभाजन गर्न खोजियो । त्यसबेला मधेश केन्द्रित दुई दल मिलेर ओलीको प्रयास निस्तेज बनाए । पार्टी एकीकरण त भयो ,तर मन भने अझै दुई नै छ । तत्कालिन जनता दल अर्थात महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोको मन ओलीप्रति नै ढल्केको छ भने उपेन्द्र यादव र डा. बाबुराम भट्टराईको चाहना ओलीको विस्थापन रहेको छ । यही दुई लाइनले गर्दा जसपा अहिले पनि अनिर्णित छ ।
समस्याको जरो फेरि पनि ओली नै बनेका छन् । ओलीले मरेपछि डुमै राजा भने जसरी आफू पदमा नरहे कांग्रेस माओवादीलाई पनि नदिने रणनीति बनाएका छन् । भित्रैबाट नभएपनि बाध्यतावश ओलीले महन्थ ठाकुरलाई आगामी प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रस्तावित गरेका छन् । ठाकुर पनि त्यही ललीपपमा भुलेका छन् । ओलीले बनाएको प्रधानमन्त्रीको जग कति बलियो होला ? त्यसको लेखाजोखा गर्न अफ्ठेरो अवस्था छ । किनभने ओलीले पार्टी भित्रैपनि निरंकुशता चलाइरहेका छन् । उनको समर्थन कति बेला कहाँ भत्कने हो, टुंगो छैन । माधव नेपाल र झलनाथ खनालले कतिबेला कस्तो भूमिका निर्वाह गर्ने हुन् भनेर अहिल्यै लख काट्न सक्ने परिस्थिति पनि छैन ।
त्यही कारणले डा.बाबुराम र उपेन्द्र यादवहरुको तर्कले काम गरेको जस्तो देखिन्छ । कांग्रेस र माओवादीको समर्थनमा सरकार बनाउँदा प्रतिगमन सच्चिएको सन्देश जाने मात्र हैन स्थिर र पाको सरकार बन्ने अवस्था बन्न सक्छ । त्यही रस्साकस्सीमा परेको जसपाले ठोस निर्णय लिन सकिरहेको छैन ।
नेपाली कांग्रेस र माओवादीसँगको एकताले पार्टी एकता र मधेशी जनताको पक्षमा केही देखावटी काम र निर्णय गर्न सकिने अनुमान नेताहरुको रहेको छ । सम्भवतः यसै साता सबै पक्ष प्रष्ट हुने र सत्ताको लागि साझेदार खोज्ने काम सम्पन्न हुनेछ । साथै, कस्तो समीकरणको परिस्थिति बन्छ त्यसै अनुसारको संसदीय दलको नेतृत्व समेत आउने अवस्था छ । संसदीय दलमा ठाकुर, महतो, डा. भट्टराई र यादव आकाँक्षी छन् ।
ओली अहंकारीः भूषाल ५ घण्टा पहिले
वृद्ध सासुको सम्पत्ति लिएर हेरचाह नगर्ने सुष्माका श्रीमान रेग्मी पक्राउ ५१ मिनेट पहिले
अनलाइनमार्फत सेवा प्रवाह शुभारम्भ समारोह ७ घण्टा पहिले
नयाँ वर्षमा नयाँ वानेश्वरमा खुल्याे मोडलीङ एजेन्सी ९ घण्टा पहिले
महंगो बजेटमा मुकुन्दको एक्स ९–लेभल १ ८ घण्टा पहिले
पाँच कम्पनीको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट, प्रतिकित्ता मूल्य कति ? ९ घण्टा पहिले
मेगा बैंकले क्यूआर कोड दिएपछि रिक्सा चालक हर्षित ४ दिन पहिले
राष्ट्रका नाममा प्रधानमन्त्री ओलीकाे सम्बोधन: वर्ष २०७७ निरर्थक भएन ! २ दिन पहिले
सुदूरपश्चिममा थप १४ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि १ दिन पहिले
महोत्तरीमा नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ३ हप्ता पहिले
ज्योति लाईफको कारोबार सुरु, शेयरमा उच्च माग १ हप्ता पहिले
सेतो मच्छेन्द्रनाथको रथयात्रा स्वास्थ्य मापदण्ड बमोजिम गर्ने तयारी २ दिन पहिले
दक्षिण कोरियामा राहदानीको अवधि नभए प्रवेशाज्ञा नथपिने २ हप्ता पहिले
बैठक बहिस्कार गरेको नेपाल-खनाल पक्ष युवा संघको भेलामा व्यस्त ४ हप्ता पहिले
भारतमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमितहरु डेढ लाख नाघे ११ महिना पहिले
स्थानीय सरकारद्वारा लक्षित वर्गको घरघरमा स्वास्थ्य जाँच ३ महिना पहिले
आजदेखि लहानमा निषेधाज्ञा जारी ८ महिना पहिले